Equip.li - COVID-19 को समयमा पादरीहरूको स transition्क्रमणमा मद्दत गर्दै
अनलाइन चर्च को आदर्श उदाहरण
तपाइँको भिडियो कसरी सेट अप गर्ने
भिडियो क्यामेरामा कसरी बोल्ने
भिडियो रेकर्ड गर्न एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्नका लागि सल्लाहहरू
हामीले कुन भिडियो उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ?
कानूनी संगीत विकल्पहरू
प्रतिक्रिया र तयारी
कसरी अनलाइन-मात्र चर्च सेवा घोषणा गर्ने
सहयोगी वेबसाइट लिंकहरू
भिडियो विचार सूची
इन्टरनेट बिना मन्त्रालय
फोनका लागि मेमोरी कार्डहरू
प्रार्थना साझेदार प्रचार गर्दै
बच्चाहरू, युवा, र अभिभावकहरूलाई अनलाइन मन्त्रालय
आइतवार पछिको सेवा प्रार्थना टीम
भावनाहरू प्रबन्ध गर्न उपकरणहरू
गिर्जाघरहरूको लागि स्क्रिप्ट कल गर्नुहोस्
COVID-19 को समयमा पास्टरहरूको लागि धर्मशास्त्र
COVID-19 को गम्भीरता
भवन निर्माण पुनः सुरू गर्नुहोस्
एन्टी-मास्क लेखमा प्रतिक्रिया
एन्टी-मास्क लेख #2को समीक्षा
COVID-19 को समयमा पादरीहरूको सtors्क्रमणमा मद्दत गर्दै
पास्टर-देखि-पास्टर सल्लाह (# ०१)
by एक टिप्पणी छोड
मैले यो भिडियो धेरै समूहहरूमा पोष्ट गरेको छु म मन्त्रीहरूसँग छु। मलाई थाहा छ कि मेरा सबै सेवकाई मित्रहरू ती समूहहरूमा छैनन्, त्यसैले मँ यसलाई यहाँ साझा गर्दैछु। साझेदारी गर्नुहोस् र तपाईंको पास्टरलाई ट्याग गर्नुहोस्। यो उसलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यो व्यक्तिगत तरिकाले व्यवहार मा नौ कदम तपाईं मद्दत गर्दछ, तपाईं पास्टर होईन भने पनि। १ fast मिनेटको मार्कमा केवल छिटो अगाडि। म मेरो अर्को पुस्तकमा काम गर्दैछु (यद्यपि मसँग प्रकाशक नभए पनि)। नेताहरूको लागि अधिक व्यावहारिक सल्लाहको साथ - यो "मद्दत, म शुल्कमा छु" को अनुगमन हुन गइरहेको छ। म अध्यायहरू रोकिरहेको छु र प्रारम्भिक लेखन गर्दै छु। जसरी मैले यो अध्यायलाई संकटमा अग्रसर गराउने बारेमा लेखेको थिएँ, मैले निर्णय गरे कि पुस्तक प्रकाशित नभएसम्म यो साझा गर्न कुर्नु हुँदैन। यसको सट्टा, मैले यसलाई भिडियोमा सिकाउने निर्णय गरें। यहाँ छ - कुनै प्रतिलिपि अधिकार प्रतिबन्ध बिना। पहिलो १ minutes मिनेट १० विचारहरू छन् (दुई समावेश गरी मैले "नम्बर call" भन्ने गर्छु) तपाईंको चर्चको नेतृत्व गर्ने बारेमा। अन्तिम ११ मिनेट व्यक्तिगत रणनीतिहरूमा केन्द्रित छ। तनाव र दबाव सामना गर्न को लागी। म crisis चीजहरू साझेदारी गर्दछु जुन म यस स through्कटको माध्यमबाट स्वस्थ, समझदार र वास्तविक रहनको लागि गर्दैछु। म प्रार्थना गर्दछु यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग विचार वा प्रश्नहरू छन् भने, तल टिप्पणी गर्नुहोस्। पूर्ण अस्वीकरण: म एक विशेषज्ञ होइन। म तपाईं जस्तो सबै समान भावनाहरू र दबावहरूसँग व्यवहार गर्दैछु। मैले भर्खर एउटा पुस्तक लेखिरहेको छु जस्तो मैले यसलाई व्यवहार गरिरहेको छु। यो एक साथी सr.्घर्षबाट विचारहरू हो। हामी यसलाई यस मार्फत बनाउने छौं - सँगै!
पोस्ट रड लोय बुधवार, अप्रिल १, २०२०
तपाईं संकट प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न। दैनिक कुराकानी गर्नुहोस्।
दूर समाप्त रेखा छनौट गर्नुहोस्। (विकल्पहरू राज्यको लागि अनुमति दिईएको दायरा 2022)
दिगो गति छनौट गर्नुहोस्।
एक व्यक्ति जस्तै क्यामेरा व्यवहार (एक्लो, घरमा अडक); क्यामेरा प्रचार।
आशा प्रचार गर्नुहोस्।
लगनशील भण्डारेको अभ्यास गर्नुहोस्। (तपाईले सक्नुहुने सबै ठाउँमा कटौती गर्नुहोस्।)
चर्चका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। फोनमा कल गर्नुहोस्।
दीर्घकालिक सोच्नुहोस्। हामीले कस्तो बानी बसाल्नु पर्छ? भाँच्नु पर्छ?
संकट तपाईं आउँदा पनि आउँछ।
एक बाहिरी ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। (खाना साझेदारी गर्नुहोस्। मिसनहरू, प्रार्थना पदयात्रा, वा अझ बढी)
पास्टर रड लोयले त्यसपछि भिडियोको दोस्रो भागमा (१ 13:०० मिनेटको चिह्नमा) खर्च गर्दछ कि कुन आनीबानीले उनलाई COVID-१ ((कोरोना भाइरस) को मौसममा सामना गर्न मद्दत पुर्‍यायो।
दायर अन्तर्गत: मन्त्रीहरूलाई प्रेरणादायक सल्लाह
यो एन्टी-मास्क लेखका सामग्रीहरूको प्रतिक्रिया हो "स्वस्थ मानिसहरू मास्क लगाउँदछन्, उनीहरूले गर्नुपर्दछ कि हुँदैन?" पेट्रसिया न्युन्स्वान्डर (एक नर्स प्राक्लेसनर) द्वारा, जेनिफर मार्गुलिस द्वारा सम्पादन गरिएको, पीएचडी (अंग्रेजीमा) अंकको साथ सुरू गर्नुहोस् ... [पढ्न जारी राख्नुहोस्] एन्टी-मास्क लेखको समीक्षाको बारेमा # २
सामाजिक रूपमा टाढा सानो समूहहरू
केही सरकारहरूले कति व्यक्तिहरू भेट्न सक्छन् भनेर सीमा तोक्दछन्। (उदाहरणका लागि १० भन्दा बढि मानिस छैन)। त्यसोभए कुनै पनि चर्चसँग तिनीहरूको चर्चका जो कोहीलाई पनि यी साना समूह बैठकहरूमा भेला हुन अनुमति दिन विकल्प हुन्छ। यी साना बैठकहरु भित्र मानिसहरु संग हुनु पर्छ। [पढ्न जारी राख्नुहोस्] सामाजिक रूपमा टाढा सानो समूहहरूको बारेमा
यो रसल ब्लेकको एन्टी-मास्क लेखका अवयवहरूको प्रतिक्रिया हो, "फेस मास्कहरू स्वस्थका लागि गम्भीर जोखिमहरू हुन" वा "फेस मास्क स्वस्थ मानिसहरूका लागि घातक हुन सक्छ न्यूरोलॉजिस्ट भन्छन्" बाट शीर्षकहरू। रसल ब्लेक को हो? ऊ हैन… [पढ्न जारी राख्नुहोस्] एन्टी-मास्क लेखलाई प्रतिक्रियाको बारेमा
केही सरकारहरूले अन्त्येष्टिका लागि भेला हुन अनुमति दिँदैन। यहाँ केहि अन्य विकल्पहरू छन्: ड्रप-अफ क्यान्डललाइट वेक ड्रप-अफ मोमबत्ती प्रकाश। स्रोत यसले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण महामारीको सुरक्षा तोडिन बिना जीवन सेवाको उत्सवको लागि अनुमति दिन्छ ... [पढ्न जारी राख्नुहोस्] अंतिम संस्कार विकल्पहरूको बारेमा
भवन निर्माण चर्च सेवाहरू पुनः सुरूवात गर्दै
केही सरकारी अधिकारीहरूले चर्चहरूलाई भित्र-भित्र भेट्न अनुमति दिन थालेका छन्। तपाईं यस निर्णयलाई बोर्डको सदस्यहरूसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको भवनमा चर्चको रूपमा पुन: स्थापना गर्ने कि कसरी। पेशेवरहरूको मूल्यांकन गर्न Click प्रश्नहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र ... [पढ्न जारी राख्नुहोस्] भवन निर्माण चर्च सेवाहरू पुनः सुरूवात गर्ने बारेमा
अनलाइन भिडियो मार्फत चर्च
इन्टरनेट बिना मान्छे को सेवा
धर्मशास्त्र पुन: COVID-19
एन्ड्रोइड मार्फत भिडियोहरू
तपाइँको भिडियो सेट अप गर्नुहोस्
बच्चाहरू, युवा, र आमा बुबा
अनलाइन मात्र घोषणा गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 · Equip.li by सुसमाचार मेमोरी कार्डहरू · साइटमैप · लग - इन